Nagu saabsan - Shijiazhuang Winclan Makiinado Qalabka Co., Ltd.
Shijiazhuang Winclan Makiinado Qalabka Co., Ltd.Our saarka ugu weyn waxaa ka mid ah bamka kala duwan. Bambooyinkeena waxaa si weyn loogu isticmaalaa ilaalinta deegaanka, macdanta, dhuxusha, dhirta tamarta kuleylka, batroolka, kiimikada, daaweynta bullaacadaha, noocyada mashaariicda dhowrista biyaha, waraabka beeraha, dhismaha, iwm. Isla mar ahaantaana, waxaan sidoo kale ku lug leenahay fureyaasha bilowga iyo qalabka bamgareynta. Iyada oo leh noocyo kala duwan, tayo wanaagsan, qiimo macquul ah iyo naqshado casri ah, alaabooyinkeenna waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa batroolka, kiimikada, daawooyinka iyo warshadaha kale. Wax soo saarkayagu si ballaaran ayaa loo aqoonsan yahay oo ay ku kalsoon yihiin adeegsadayaashu waxayna la kulmi karaan had iyo jeer isbeddelada baahiyaha dhaqaale iyo bulsho ee aan aaminsanahay tayada wanaagsan iyo adeegga ugu fiican waa nolosheena, Waxaan si kal iyo laab ah u soo dhaweynaynaa dhammaan saaxiibbada nala soo xiriira!
waxaan haynaa in kabadan 20 sano oo khibrad soosaarid ah.Kooxdeena waxay kakoobantahay barxad caalami ah oo dad aad u heersare ah uwada shaqeynaya si loo hubiyo guusha macaamiisheena. Dadka halkan jooga dhammaantood waxay ku hubaysan yihiin khibrad aad u sarreysa, ballanqaad sarre leh iyo waditaan xoog leh si loo sameeyo horumar faa'iido leh, oo la gaaro dherer cusub oo xagga adeegga ah isla markaana la gaarsiiyo natiijooyin dhab ah.
Shijiazhuang Winclan Makiinado Qalabka Co., Ltd. Waxaan ku dhegannahay mabda'a ganacsiga ee "Faallooyinka lagahelayo wax soo saarka iyo adeegga tayada sare leh", sidaas awgeedna waxaan ku siineynaa adeeg geedi socod oo dhan ah naqshadeynta wax soo saarka, horumarinta, soo saarista, rakibida iyo adeegga iibka kadib. loogu talagalay macaamiisha leh farsamooyinka heerka koowaad ee alaabada darajada sare. Shirkadeena waxaa la siiyay cinwaanka "Alaab-qeybiye lagu kalsoonaan karo & Adeeg-bixiye" adeeg-bixiyeyaal fara badan. Waxaan sidoo kale sii wadaynaa horumarka iyadoo lagu saleynayo heer maamul heer sare ah iyo miyir qabka horumarka si aan ugu keenno mashiinadeena suuqyada gudaha iyo dibada.